Tandindomin-doza ny toekarena an-dranomasina eto Madagasikara - Transparency International - Initiative Madagascar
Nivoaka ny 01 Oktobra 2018 ao amin'ny
Izahay, fivondronan’ny fiarahamonim-pirenena manasonia izao fanambarana izao, dia maneho ny ahiahinay manoloana ny fifanarahana nosoniavina tany Beijing (Sina) tamin’ny 5 septambra 2018 notontosain’ny ny Vondrona Malagasy momba ny fampandrosoana ara-toekarana sy ny fampivoarana ny orinasa (AMDP) niaraka tamin’ny fivondronan’ireo mpampiasa vola sinoa Taihe Century Investments Developments Co. Ltd, izay soloan’Andriamatoa Miao Jirong tena.
Mifanohitra tanteraka amin’ny fanambarana ofisialy natao tamin’ny fanaovan-tsonia azy ity fifanarahana ity satria nolazaina tamin’izany fa hampiroborobo ny toekarana an-dranomasina izy ity kanefa, rehefa fakafakaina, dia loza manambana ho an’ny tontolo an-dranomasintsika izay efa marefo dia marefo tokoa.
Nanatrika ity fanaovan-tsonia ity A/toa Hery Rajaonarimampianina, roa andro monja talohan’ny nametrahany fialana tsy ho Filohan’ny Repoblika intsony, ary tsy nisy fifampiresahana sy fifampierana natao tamin’ireo mpisehatra voakasika. Fanaovana ho tsinontsinona ireo mety ho voka-dratsy maharitra aterak’io fifanarahana io eo amin’ny tontolo iainana sy ny vahoaka Malagasy izany. Mampiahiahy loatra ny tsy fangaraharahana manodidina ity fifanarahana ity.
Fampiasam-bola mitentina hatramin’ny 2.7 miliara dollars no homanin’ny Taihe Century Investments Developments Co. Ltd ary ny 700 tapitrisa dolara amin’izany dia natokana, amin’ny dingana voalohan’ny tetikasa, ho an’ny fitrandrahana ireo harena an-dranomasina amin’ny alalan’ny sambo miisa 330. Amin’izao andro sy lera hamoahana ity fanambarana ity, dia tsy mbola misy fantatra ny antsipirihan’io fifanarahana io.
Tsy azo antoka fa hitondra ny tombotsoa ara-toekarana ampanantenainy ity tetikasa ity, nefa fantatra fa efa hanomboka amin’ity taona ity iny asa mifandraika aminy. Mbola mampiahiahy ireo lazain'ny AMDP fa tombotsoa noho ny tsy fisian’ny fanadihadiana momba izay mety ho fiantraikany eo amin’ny toekarana sy eo amin’ny tontolo iainana. Takian’ny lalàna anefa izany ho an’ ireo tetikasa rehetra heverina fa mety hamotika ny tontolo iainana. Tsikaritra fa tsy mitovy mihitsy ny zava-misy eo amin’ny vokatsoa ara-toekarana nampanantenaina sy ny zava-misy marina raha dinihina ireo fifanarahana hafa efa nisy toy ny an’ny firenena Mauritanie sy ny orinasam-panjakana sinoa Poly Hon Don tamin’ny 2011.
Lazaina fa hitondra fampandrosoana eo amin’ny toekarena an-dranomasina eto Madagasikara ity tetikasa ity kanefa toa mifanohitra tanteraka amin’ireo foto-kevitra hoe hampitombo ny tombotsoan’ny vahoaka amin’ny lafiny fiaraha-monina sy toekarana ny zavatra tiany hatao. Loza manambana ho an’ny fampandrosoana maharitra sy ny fikajiana ny tontolo an-dranomasina ity tetikasa milaza ho fanararaotra ara-toekarena ity.
Raha tsiahivina, mamelona olona miisa hatramin’ny 1 tapitra eo ho eo ny jono an-dranomasina eto Madagasikara. Tombanana eo amin’ny 130 000 tonnes isan-taona ny vokatra eto an-toerana izay heverin’ny manam-pahaizana eo amin’io tontolo io aza fa efa mihoatra ny tokony ho izy. Manoloana izany, marina ny filazana fa hanimba tanteraka ny tontolo iainana sy ny fivelomanana ara-tsakafo ny fahatongavan’ireo sambo fanampiny miisa 330 ireo.
Ny tena te-hikajy ny toekarena an-dranomasina tokoa ireo tompon’andraikitra dia tokony ny fitantanana tsara sy lavorary ny loharanon-karena, ny fomba fitantana mangarahara, ary ny fampiasana ara-dalàna ny faridranomasina no tokony himasoany.
Lasa fomba fanao tsy mety, zary lasa mahazatra eto Madagasikara, ilay tsy fisian’ny mangarahara, ary tsy miavaka amin’izany ny fomba sy ny fepetra nanaovana ity fifanarahana ity. Ny tsy fangaraharana manodidina ny fanasoviana sy ny tsy fisian’ny tombana ara-toekarana sy ara-tontolo iainana no mahatonga anay hitsipaka ny fampiharana izany fifanarahana izany.
Mangataka, arak’izany, ireo fiaraha-monimpirenena manao Sonia izao fanambarana izao mba:
Havoaka ampahibemaso sy amin’ny antsipirihany ho fantatry ny rehetra ireo andinindiny momba ny fifanarahan’ny AMDP sy ny Taihe Century Investments Developments Co.Ltd;
Hisy ny fanadihadiana tsy miankina momba ny mety ho fiantraikan’ity fifanarahana ityeo amin’ny lafinytoekarena sy tontolo iainana;
Tsapaina sy hanontaniana mialoha ny hevitr’ireo mpisehatra voakasik’ireo fifanarahana rehetra mety hisy fiantraikany amin’ny politikam-pitantanana ny harena sy ny tontolo an-dranomasina eto amin’ny firenena, izay vao manapa-kevitra.
Noho izany, eto am-piandrasana ny fanadihadihana sy ny fikaonan-doha tontosain’ireo mpisehatra rehetra dia mangataka izahay ny fampiatoana tsy misy hatakandro, ity fifanarahana voalaza ity.
Antananarivo, faha 28 septambra 2018
MIHARI SY IREO VONDRONA MPIARA-MIASA